Survey dhise - Sida loo sameeyo Survey ah
> Resource > Talooyin > Sida loo abuuro Survey la Survey dhise
Su Online u noqday aalad muhiim u ah macallimiinta iyo tababarayaasha si loo cabbiro ardayda iyo ardayda. Oo su'aalaha kala doorashada badan (MCQ) ayaa si weyn loo isticmaalay dhammaan noocyada kala duwan ee qiimaynta deg-deg ah. Haddii aad rabto in aad ka shaqeyso su'aalaha kala doorashada badan, Wondershare QuizCreator ayaa kaa caawin doona. Waa dhan-in-ka mid ah barnaamijka gaare kedis oo ay ku jiraan 9 noocyada su'aal caan ah oo ay ku jiraan su'aal kala doorashada badan. Oo waa inaad ku gaare doorasho kedis badan ka dhigi kara iyo in la abuuro aalaha Flash ku salaysan mashquuliya. Hadda raac talaabooyinkan hoos ku qoran si aad u barato sida loo abuuro kedis doorashada badan.
1 Samee su'aal Multiple Choice
On tab Home ah, riix badhanka su'aasha, xulo kala doorashada badan ee liiska New Su'aal iyo riix OK in wax ka bedel su'aasha ah ee suuqa kala Su'aal ayeey.
2 gala su'aal duurka su'aal qoraalka
Ku qor su'aasha kala doorashada badan duurka su'aasha ah, oo aad wax ka bedel Waxaa laga yaabaa font baaritaanka sida ugu fudud ee la isticmaalayo qalab Microsoft Office. Waxa ku habbon tafatirka awood leh, waxaad si fudud u geli karo sawirada, isleegyo, hyperlinks iyo xitaa note qaar ka mid ah talooyin.
Ka sokow, QuizCreator bixisaa meesha warbaahinta si aad u geliso sawir, cod, iyo video files. Gali audio -. Waxa aad ku qori karta clip dhawaaq, dajiyaan file maqal ah ama xitaa badalo qoraalka si ay u hadalka aad su'aasha Geli video - aad gelin kara ah FLV ama Jabbuuti file su'aasha.
3 gala doorasho iyo berrinkaba ku Choices
Ku qor doorasho ee Choices beerta oo u fiirsada jawaabaha saxda ah ee saxda ah column. Waxaad geli karaa labo doorasho ugu yaraan, iyo sagaal iyo ugu badnaan. Images, isleegyo, hyperlinks iyo noocyada sixiddiisa sidoo kale waxaa laga heli karaa in la kala dooranayo.
4 -celin Set u su'aasha kala doorashada badan
Ka dib markii la abuurayo aad kedis, waa in aad bixiso qaar ka mid ah jawaabcelinyo wada qabanayo si dableeyda kedis. Waxaad dooran kartaa nooca-celin ka mid ah liiska hoos-hoos ee ku celinta group iyo doortaan labada by Su'aal ama Jawaab.
By Su'aal : feedback wuxuu ku salaysan yahay in su'aal laga jawaabo sax ah ama aan.
By Jawaab : feedback wuxuu ku salaysan yahay doorashada hal ka mid ah jawaabaha. Kooxaha dableeyda ee Kediska doortaan doorashooyin kala duwan oo aad u hesho jawaab-celin kala duwan.
Ku qor fariin jawaab-celin si doorasho sax ah oo aan sax ahayn in su'aasha ugu celinta Murayaad. Pictures, isleegyo, iyo files audio la galin karaa in meel sare.
Branching sidoo kale waxaa laga heli karaa kooxda celinta ah. In aad su'aalo kala duwan oo ku salaysan jawaabaha ay u su'aalaha hore ku kori karaan kooxaha dableeyda ee kediska. Like-celin, branching sidoo kale la cayimay karaan su'aal ama jawaabta. Waxaa hanuunin doonaa tijaabada u qaadaan in ay "sii wadaan, dhameystaan ​​ama tag su'aal gaar ah".
5 dhibcood Set, wakhtiga xaddidan oo dheeraad ah oo loogu talagalay su'aalaha ku kala doorashada badan
Si aad u samee baaritaan hufan, waxaa jira qaar ka mid ah guryaha sida dhibcood , isku day oo wakhtiga xaddidan ee lagu hagaajin karo in su'aasha. Ka sokow, waxaad samayn kartaa kori si su'aalo kala duwan oo ku salaysan ay doortaan in ay su'aalaha hore kooxaha dableeyda ee kediska.
6 Save the kedis doorashada badan
Marka aad dhamaysato tafatirka ee kedis tan, waxaad riixi kartaa OK si loo badbaadiyo su'aasha iyo xidho Su'aal ayeey suuqa kala. Ama waxaa laga yaabaa in aad riix Su'aal New button si loo badbaadiyo su'aasha hadda iyo in la abuuro su'aal kale kala doorashada badan.
Hadda idinku waxaad ku dhameysatay kaalinta abuurka ah su'aalaha ku kala doorashada badan. Tag Guryaha iyo aad sameyn karto wax badan oo ka mid ah goobaha guud ee aad ka shaqeyso su'aalaha oo dhan. Si aad u kedis doorashada badan eegto mashquuliya ka badan, waxaad dooran kartaa ka dhisay-in kedis ciyaaryahan template jilicsan ama design mid iskaa. Markaasay aad daabici karo kedis sida imtixaanka Flash ah si ay uga hortagaan dadka kale. Haddii aad rabto in aad si ay ula socdaan natiijada, waxaad cayimi kartaa cinwaanada email qaar ka mid ah uu furmo suuqa soo bandhiga, ama aad geliyaan laga yaabaa kedis ah in LMS ama QuizCreator Online yimaado la QuizCreator.
Imtixaanka Easy Kan sameeyey - Samee Kediska ah fudayd
Sida loo dhoofiyo iyo Print Facebook Rasuulka Messages
Save Taariikhda Card ah: Sida loo sameeyo gaar Save a Taariikhda Card ah
Sida loo sameeyo Wedding Guuradii Cards u dabaal Your Guurka
Hawlgabka sawrirrada Fikradaha Making Hawlgabka sawrirrada
Sida loo sameeyo Dhalashada Farriin shakhsiga Baby Photo ah